Ny Holandeana dia tsy mahatsapa ny toe-javatra misy azy ireo: ny fanandramana an-tranomaizina Stanford: Martin Vrijland
Ny Holandeana dia tsy mahatsapa ny toe-javatra misy azy: ny fanandramana an-tranomaizina Stanford
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 24 June 2019	• 5 Comments
Tao amin'ny 1971, Filip Zimbardo dia nanao fanandramana tany am-ponja tao amin'ny oniversiten'i Stanford tany Californie. Mahaliana fa nanoratra boky momba izany izy taty aoriana tamin'ny lohateny hoe "ny vokatr'i Losifera. Ao amin'ny lahatsoratro aho no nanamarika matetika fa ny tantara en an'ohatra dia manondro fa ao anatin'ny iray isika Lozisiela simulation miaina (mahita / milalao). Mety ho antony voalohany ho an'ny mpamaky vaovao izany, saingy mbola manohy manohy mamaky aho, satria te hampiseho ny fiheveran'ny fiarahamonintsika maro ny toetra azontsika ato amin'ity Standford (/ Zimbardo) fanandramana am-ponja. Azonao atao ny mamaky ireo lahatsoratra eo ambanin'ny rohy any aoriana.
Ny fanandraman'i Zimbardo dia mampiseho fa ireo mpiambina fonja dia nametraka fitsipika maro sy mafy kokoa tao anatin'ny andro vitsivitsy mba hankatoavina ireo voafonja mpikomy. tena manadino tanteraka ny maha-olombelona. Anatin'ity fanandramana ity, ireo gadra sy mpiambina dia mpianatra izay efa nodinihina mialoha ara-batana sy ara-tsaina. Ny famintinana ny fanandramana etsy ambany dia mety tsy ny famaritana mazava ny fanandramana, saingy manome famintinana mety izany. Ao amin'io VPRO interview afaka maheno izay nolazain'i Philip Zimbardo momba ny fanandramana.
Zava-dehibe ny manamarika fa i Zimbardo tenany ihany koa dia nanatrika nandritra ny fanandramana ary nanomboka naneho ny fironana mampalahelo tahaka ireo mpiambina an-tsitrapo. Raha ny tena marina, ny fanandramana dia manipika fa ny fisian'ny gadra dia manandrana manao ny andraikiny "na dia tsara kokoa" aza, rehefa miezaka ny manao ny adidiny "tsaratsara kokoa", amin'ny fitazonana fepetra misimisy kokoa, mba tsy hamonoana ny fahombiazan'ny andraikiny. Tamin'ny andro 2 dia nanomboka niodina ireo voafonja hosoka, satria nanomboka niasa ara-tsaina ny toe-draharaha nisy azy ireo. Na dia izany aza, ireo mpiambina sandoka dia nanao ny asany tamim-pahamendrehana ary tsy ela dia adino fa fanandramana izany. Tamin'ny roa andro, nanomboka nitifitra ireo voafonja hosoka tamin'ny alàlan'ny famonoana afo ireo mpiambina mba hitazona azy ireo hifehezana ary hanidy azy ireo ao amin'ny efitra fisaka izay tsara toerana fotsiny mba hitsangana. Jereo ny famintinana ny fanandramana etsy ambany.
Ny antony amaritako ity fanandramana ity dia satria mino aho fa azo ampitahaina amin'ny sehatra sosialy lehibe kokoa ny fampitahana, izay ahafahantsika manasaraka ny fiarahamonina amin'ny tarika roa:
Ireo mpamorona, mpanamboatra sy mpanara-maso ny fitsipika izay toa mikendry ny hitazona ny filaminana ao anatin'ny fiaraha-monina, saingy amin'ny ankamaroan'ny toe-javatra dia efa niaina toy ny famerana ny fahalalahana
Ny kilasy miasa izay tsy maintsy manaraka ny lalàna sy fitsipika ary mandoa hetra
Mety ho fisarahana na dia mainty na mainty na fotsy eo amin'ny masonareo, fa raha ny marina dia maro kokoa ny olona miasa ho an'ny 'rafitra' (vondrona 1). Ny fanjakana dia mifototra amin'ny lalàna sy fitsipika ary olona maro no mandamina ny fampidirana, ny fampiharana ary ny fanaraha-maso ireo lalàna sy fitsipika ireo. Tsara ho lazaina ianao:Eny, saingy ny lalàna sy ny lalàna dia ilaina ho an'ny firenena miasa tsara ary tsy azo ampitahaina amin'ny fanandramana am-ponja, satria tsy miaina am-ponja isika". Avy eo dia te-hanondro anao aho fa ireo mpiambina sandoka tao amin'ny fanandraman'i Zimbardo dia tsy mba nientanentana tamin'ny gadra ihany koa ary nahatsikaritra tanteraka ihany koa fa namolavola fitsipika marobe sy mafy kokoa izy ireo (mba hanadinoany ny maha-olombelona). Izany dia mety mbola hitanao fa mbola tsy azo ampitahaina amin'ny fonja ny fiarahamonina, fa manontany anao aho raha tena mijery anao tokoa aho.
Alaivo ny isan'ireo fiara miaraka amin'ny tafo feno sarimihetsika izay hitanao mandeha amin'ny tanànanao na tanàna. Mariho ny isan'ireo scooters miaraka amin'ny fakantsary ao ambadika. Mariho ny isan'ireo fakantsary izay hitanao mihantona ao amin'ny arabe maromaro na eny amin'ny làlambe. Mariho ny isan'ny BOA, ny polisy ary ny mpanamory hafa izay hitanao mandeha na mandeha amin'ny andro 1. Marihina ny isan'ny sampana fanangonana, biraon'ny biraon'ny sampana, ny sampan-draharaha fitsaboana, ny mpandinika ny tanàna, sns., Ao anatin'ny haavon'ny 25 kilometatra avy ao an-tranonao. Alamino ny isan'ireo olona ao amin'ny tontolo iainana akaiky anao izay miasa amin'ny "fikarakarana" (toy ny fikarakarana ny zatovo), izay tena toeram-panorenana izay misy ankizy mihidy ary matetika manararaotra (jereo ny momba ahy firaketana an-tserasera). Alamino ny isan'ireo olona ao amin'ny faritra misy anao izay miasa amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ("fikarakarana"), izay toerana itehirizana ny olona ao anaty sela, eo ambanin'ny fanafody sy ny fanaraha-maso. Ireo olona rehetra ireo, toy ireo mpiambina fonja ao amin'ny fanandramana etsy ambany, dia mahita fa tena ara-dalàna ny tokony hataon'izy ireo ary mikasa ny hiaro ny toerany sy ny fidirany. Matetika izy ireo koa no manambady sy manambady. Angamba ianao anisan'io vondrona io.
Arakaraky ny olona miara-miasa amin'ny mpiambina, ny fanekena ankapobeny dia ny hoe ny olona dia hiaro ny asany, ny toerany ary ny fitondran-tenany. Rehefa mametraka ny maha-olona azy ireo ny olona noho izy ireo tsy maintsy manao ny asany ary miaina ny fitondrantenan'ny iray amin'ny maha-mpikomy sy mikorontan-tsaina azy, dia tsikaritra tokoa ny fitondrantenan'ny fanandraman'i Stanford amin'ny lafiny maro amin'ny fiarahamonina. Mahafantatra ny tenanao ve ianao?
Manaova dingana miverina ary avereno indray ny maha-olona anao ary mametraka ny adidinao. Amin'izay fotoana izay dia mety hijanona eo amin'ny fiarahamonina io tsipika mitsivalana io. Na dia mpiantoka fotsiny aza ianao ary tsy maintsy manaisotra ny fianakaviana; Na dia BOA fotsiny aza ianao ary mamoaka safidin'ny fiara miaraka amin'ny scooter fakantsarinao; na dia mpiasa an-tsitrapo tanora aza ianao ary manidy ny ankizy ao amin'ny efitranony satria "tsara ho azy ireo"; Ary koa raha mpiasa mpikarakara ao amin'ny trano fisotroan-dronono ianao ary hametraka ny zokiolona ao ambadiky ny varavarana miaraka amin'ny PIN misy PIN "satria tsy maintsy mandeha izy ireo" Na dia mpiara-miasa amin'ny GGZ ianao aza dia manakorontana ny olona ao anaty efitrano fitokana ary mametraka azy ireo feno fanafody satria "ho lasa adala" izy ireo. Diniho ny fanandraman'i Zimbardo Stanford ary tsapao indray fa mety ho vokatry ny rafitry ny lalàna sy fitsipika ny fahadisoana fa diso ny zava-drehetra ary namorona fonja tsy misy barazy azo tsapain-tanana.
Lisitry ny rohy loharano: lucifereffect.com
Ny minisitra Schippers dia mandoa vola amin'ny fitazonana izay tsy manaiky ny fanjakana
'Ny fiaraha-monina izay ianao' no teny malaza ao Sire, fa inona kosa no azonao atao?
Lasa tafahoatra amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana ara-tsaina (GGZ) ny toeram-pitsaboana ary ny fitondran-tena manimba ny psychiatrisation
Tags: andrana, Featured, am-ponja, Fahasalaman'ny Saina Care, fikarakarana zatovo, orinasa, Stanford, Zimbardo
24 June 2019 ao amin'ny 14: 56
Ny zavatra niainako dia mampiseho fa ny ankabeazan'ny olona dia tsy afaka miahy azy raha tsy eo anivon'izy ireo izany ary avy eo vao mahatsapa fa ratsy ny zavatra. Ny "Hitanareo fotsiny izany rehefa mahatsapa izany ianao" dia mihatra amin'ny ankamaroan'ny mponina Madurodam, izay antsy nefa tsy afaka manarona ny rehetra. Izany no mahatonga an'i Madurodam hijanona ho kely foana, arakaraka ireo olona ahiahiana mahazatra izay mamolavola ny tontolon'ny zava-drehetra toy ny zana-parasy. Hatramin'io fotoana io, ny teny fanevatevana tena samirery "Manaraka ahy ny tondra-drano" ...
24 June 2019 ao amin'ny 18: 01
hahaha idd izay eny, mihodina ary mihazakazaka eo anoloan'ny sarety, dia mikatsaka hatrany ny asa fiasa sy ny soavaly sy ny mpamolavola ny vahoaka ao Madurodam.
amin'ny fahafinaretana Mennen
28 June 2019 ao amin'ny 16: 15
Nijery ny Twitter avy tamin'i Jacolien aho ary tsikaritro fa miresaka momba ny 'jesus' foana izy. Ho an'ny rakitsoratra dia tsy misy porofo milaza fa efa nisy izy !!!
Nahoana no fampielezan-kevitra ho an'ny 'jesosy'? Inona no mety ho ao ambadik'izany? Ny zazalahy avy amin'ny soratra dia te hampandroso ny 'jesus'? Marina ve ny faniriana?
Hitako ihany koa i Jacolien tena mikaroka ny fampahalalam-baovao ary tena mpandraharaha toy ny rahavaviny ary manoratra araka ny marina. Tahaka ny hoe misy manana sakafo, fikarakarana iray, izany no tonga eo amiko. Amin'ity toe-javatra ity dia tsy hitsidika ireo media rehetra ireo aho. Manangana fanontaniana izany.
28 June 2019 ao amin'ny 16: 41
Fantatrareo: ny Kristianina dia tsy handaitra na hanao na inona na inona
28 June 2019 ao amin'ny 18: 52
Indraindray, miafina izy ireo eo ambanin'ny anarana
"Kristianina". Matetika izy ireo no samy hafa fiaviana, izay afenin'izy ireo tsara amin'ireo Kristianina hafa. Tsy milaza aho hoe ity ihany no tranga fa toa hita ihany.
« Tsy afaka mamaha ny olana eto amin'izao tontolo izao isika amin'ny alàlan'ny fisainana sy ny firesahana, fa amin'izany fomba izany:
Anja Schaap avy any Katwijk ny Zoma ho avy "nalevina" tao anaty boribory mihidy »
Total visits: 15.905.550
Martin Vrijland op Iza moa i Erland Oscar Galjaard ary inona no hifandraisany amin'ny eugenika?
ZalmInBlik op Iza moa i Erland Oscar Galjaard ary inona no hifandraisany amin'ny eugenika?
Nahoana ianao no te hahalala an'izany? op Ny positimisma sy ny fanantenana!